प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल लाइफ इस्योरेन्स
प्रकाशित: शनिबार, जेठ १०, २०७७, ००:२५:०० नेपाल समय
कोभिड- १९ को संक्रमण र बन्दाबन्दीबाट सबै व्यवसाय ठप्प जस्तै भएका बेला तुलनात्मक रुपमा कम प्रभाव परेको भनिएको नेपालको बिमा क्षेत्रको अवस्थाबारे नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झासँग नेपाल समयकालागि शर्मिला ठकुरीले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
कोभिड–१९ ले बिमा क्षेत्रमा कस्तो असर गरेको छ?
लकडाउनले अन्य क्षेत्रमा जस्तै बिमा क्षेत्रमा पनि नकारात्मक असर परेको छ। अहिले व्यवसाय बढ्ने अवस्था छैन। दुई महिना अवधिमा नेपाल लाइफको डेढ अर्बको नयाँ व्यवसाय हुनुपर्नेमा २०–२५ करोड मात्र भएको छ। अभिकर्ता र कर्मचारी हिँड्न पाएका छैनन्, त्यसले पनि व्यवसाय विस्तारमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।
व्यवसाय कम भएसँगै जीवन बिमा कम्पनीको आम्दानी घटेको छ। जीवन बिमा कम्पनीले अहिले गरेको व्यापार बचत गर्ने प्रकृतिका मात्र छन्। ग्राहकले केही अवधिका लागि पैसा बचत गर्छन्, हामी आम्दानी हुने ठाउँमा लगानी गर्छाैं। प्रतिफलबाट बिमितलाई बोनस पनि दिन्छौं।
बिमा कम्पनीको धेरै पैसा बैंकको मुद्दती निक्षेपमा छ। अहिले ब्याजदरमा २ प्रतिशत घट्दा आम्दानीमा असर गरेको छ। कम्पनीको लागत उत्तिकै छ। यसले कम्पनीको वित्तीय स्वास्थ्यमा असर पर्ने नै भयो।
व्यवसाय विस्तार गर्ने भन्दा पनि टिक्ने बेला भएकाले त्यहीअनुसार काम गरिरहेका छौं।
टिक्नका लागि के गरिरहनु भएको छ?
बिजनेस मोडल पूर्ण रुपमा डिजिटल बनाउँदै छौं। अभिकर्तालाई डिजिटल फ्रेन्डली बनाउन र बिमाको सेवा अनलाइन माध्यमबाट सहज प्रवाह गर्नेतर्फ अगाडि बढेका छौं।
सकारात्मक कुरा चाहिँ मानिसमा जोखिम हस्तान्तरण गर्नुपर्छ र त्यसका लागि बिमा नै गर्नुपर्छ भन्ने सोचाइ देखिएको छ।
विद्यमान ग्राहकका लागि बिमा समितिबाट ब्याज र बिमा लेख नवीकरण शुल्क मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। समयमा किस्ता तिर्न चाहेमा छुट दिने र इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट गर्ने वातावरण मिलाइएको छ। नगद आवश्यक परेमा ऋण लिन पनि सहज बनाइरहेका छौं। यसमा पनि अनलाइन पेमेन्ट गर्ने प्रयास भइरहेको छ। बिमा लेखको भुक्तानी पनि बैंक खातामार्फत गरिरहेका छौं।
कोरोना संकटले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि ठूलो गिरावट आउँदै छ, यसले बिमा व्यवसायमा कस्तो प्रभाव पार्ला?
बिमाको दायरामा समेटिएका सर्वसाधारणमध्ये ठूलो भूमिका वैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्स हो। रेमिट्यान्सको आम्दानी कम हुनेबित्तिकै बिमामा स्वतः असर पर्ने नै भयो। यसै पनि हामीकहाँ बिमाको पहुँच धेरै कम मानिसमा छ। बिमा महँगो छ भन्ने धारणा छ। बचत प्रकृतिको बिमा लेख महँगो होला तर जोखिम मात्र कभर गर्ने बिमा लेख शुल्क तिर्न गाह्रो छैन।
जीवन बिमा कम्पनीको कोष उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको छ। राज्यले यो कोषलाई सदुपयोग गर्न सक्ला?
बिमा कम्पनीलाई कर्पोरेट कम्पनीसँग दाँज्ने गरिन्छ। तर, हामी जनताको पैसा परिचालन गर्ने संस्था हौं। जनताको पैसा लिएर त्यसलाई लगानी गरी फेरि जनतालाई नै फिर्ता गर्नुपर्छ। हाम्रो प्राथमिकता जनताको पैसाको सुरक्षा हो।
बिमा कम्पनीले आफ्ना लागि आफैं काम गर्नुपर्छ। कुनै विकल्प नभएकाले बैंकमा राख्नुपरेको हो। बिमा समिति र कम्पनी मिलेर पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने क्षेत्र पहिचान भएको छ।
बिमा कोषको रकम देशको आवश्यकताअनुसारका क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ। तर लगानीको सुरक्षा हुनुप¥यो। विश्वव्यापी रुपमा हेर्ने हो भने पनि जीवन बिमा कम्पनीको कोष सरकारी ऋणपत्र र बचत पत्रमा हुन्छ। निश्चित कामका लागि सरकारले बन्ड जारी गर्नसक्छ। तिनमा बिमा कम्पनीले लगानी गर्न सक्छन्।
कुनै पनि प्रोजेक्टमा कम्पनीले लगानी गर्दा निश्चित अवधिमा प्रतिफल सुरक्षित हुनुप¥यो। प्रतिफल आएन भने बिमितको बोनसमा असर पर्छ। सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर बिस्तारै राज्यको आवश्यकताअनुसार जीवन बिमा कम्पनीका साथै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता लामो अवधिका फन्ड व्यवस्थापन गर्ने संस्थाको रकम लगानी गर्न सकिन्छ।
यस पटकको नीति तथा कार्यक्रमले बिमा क्षेत्रलाई समेटेको छ?
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। योसँगै बिमाको पनि विकास हुन्छ। अहिले नै नेपालमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा नपाउने मानिस पनि छन्। उनीहरुलाई स्वास्थको पहुँच पु¥याउन स्वास्थ्य बिमा उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
कुन माध्यमबाट जानेमा विवाद नगरौं तर सबै नेपालीको पहुँचमा स्वास्थ्य बिमा पु¥याऔं। यसले ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ। एकातर्फ बिमाबारे सर्वसाधारण सचेत हुन्छन् भने अर्कोतर्फ व्यक्ति स्वस्थ भयो भने उसले कमाउन सक्छ।
बजेटबाट बिमा क्षेत्रले कस्तो अपेक्षा गरेको छ?
बिमा समितिको ५२ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बोल्दै अर्थमन्त्रीले बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिन पनि आग्रह गर्नुभएको थियो। हामीले जीवन बिमा गर्दा सर्वसाधारणले करमा पाउने छुटको सीमा वृद्धि गर्न सुझाव दिएका छौं।
यसले मानिसलाई बिमा गर्न प्रोत्साहन गर्छ। बचत गर्ने बानी विकास हुन्छ। बिमामा रकम जम्मा भएपछि उक्त पुँजी देश विकासमा लगाउन सकिन्छ।
अभिकर्ताहरुलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि पनि केही सुझाव दिएका छौं। अभिकर्ताहरु गाउँ–गाउँ पुगेर बिमा गरेका छन्। तर उनीहरुको आम्दानीमा कर लाग्छ। यसलाई छुट दिएमा अभिकर्ताहरु प्रोत्साहित हुन्छन्।
कर छुट एउटा साइकल जस्तो हो, एउटा क्षेत्रमा छुट दिँदा प्रोत्साहन भई आउने रकमले अन्य क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँछ।
कोरोना संकटका बेला बिमितलाई राहतका लागि केही गर्नु भएको छ?
महामारी र प्रकोप आउँदा हरेक देशले राहत कोष बनाएर त्यसैमा रकम संकलन गर्ने र खर्च गर्ने एकद्वार प्रणाली बनाएका हुन्छन्। नेपालमा पनि अहिले कोभिडको महामारीमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले राहत कोष बनाएका छन्। ती कोषमा बिमा क्षेत्रले पनि उल्लेख्य सहयोग गरिरहेका छन्। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले संघीय सरकारको कोषमा एक करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। यसबाहेक कर्मचारीले पनि साढे ८ लाख रुपैयाँ संकलन गरी राहत वितरण गरेका छन्।
बिमितहरुलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ भनेर ब्याजदरका साथै जरिबाना छुट गरेका छौं। अहिले जसले जहाँबाट जे सक्छ त्यही सहयोग गर्ने बेला हो। बिमा क्षेत्रले पनि आफ्नो क्षमता र जिम्मेवारीअनुसार सहयोग गरिरहेको छ।
कोरोना महामारीपछि बिमा क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्ला?
महामारी कहिलेसम्म रहन्छ अनुमान गर्न गाह्रो छ। अहिलेकै अवस्था पनि सामान्य हो भन्ने धारणा आउन थालिसकेको छ। ‘लिभ विथ कोभिड’ भन्न थालिएको छ। त्यसैले बिमाको पनि काम गर्ने तरिका परिवर्तन हुन्छन्। कम्पनीले अभिकर्तालाई, अभिकर्ताले बिमितलाई र कम्पनीले बिमितलाई डिल गर्ने तरिका फरक हुन सक्छ।
अब बिमाको पहुँच नै त नघट्ला। तर बिमाको प्रोडक्ट नेचर परिवर्तन हुन सक्छ। सर्वसाधारणहरु बचत प्रकृतिको बिमा लेखभन्दा पनि जोखिम कभर गर्ने र स्वास्थ्य बिमा पोलेसीतर्फ केन्द्रित हुन सक्छन्। यसले जीवन बिमाको प्रिमियममा केही असर पर्न सक्छ।
अब हाम्रो सेवा डिजिटलाइज्ड नगरी सुखै छैन। १० वर्षपछि कोही पनि मानिस बैंक वा बिमा कम्पनीमा सेवा लिन आउने वाला छैनन्। उनीहरुलाई डिजिटल सेवा पुर्‍याउनुपर्छ। कोभिडको महामारीले त्यसका लागि हामीलाई झनै दबाब परेको छ।
मानिसले जीवनमा यस्ता प्रकोप धेरै भोगेको छ। प्रकोप चलिरहँदा अब सबै सकियो जस्तो लाग्छ। केही समयपछि फेरि सामान्य हुन्छ र दैनिकी पनि पूर्ववत् सञ्चालन हुन थाल्छ।
संक्रमण चौथो चरणमा पुगिसक्यो तर, मन्त्रालयले ढाँटिरहेको छ : डा. बाबुराम मरासिनी
‘मोक्षभूमि’ मा प्रेम, यौन र संघर्षको साधना छ : केशव दाहाल
राजतन्त्र फर्काउन ‘महाअभियान’
उपत्यकामा १ हजार ३५७ संक्रमित थप
ओली र दाहालबीच सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति
आज २ हजार ५०८ जनामा कोरोना पुष्टि, २ हजार २६४ डिस्चार्ज
बाँके र प्युठानमा थप २ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
१ राजतन्त्र फर्काउन ‘महाअभियान’
२ उपत्यकामा १ हजार ३५७ संक्रमित थप
३ ओली र दाहालबीच सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति
४ आज २ हजार ५०८ जनामा कोरोना पुष्टि, २ हजार २६४ डिस्चार्ज
५ बाँके र प्युठानमा थप २ जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु